Ahoana no hanaovana azy - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy
Ahoana no hanaovana azy
Fizarana horonan-tsary momba ny fizotran'ny fanodinana zavatra samihafa.
Azo antoka fa efa nahita ny sasany ao amin'ny
Ahoana ny fomba anaovana ny vola taratasy plastika any Aostralia
Wow. Mampiasa vola taratasy plastika afaka mando i Aostralia ary tsy afaka vaky mihitsy. Ho fanampin'ny fanaovana sarotra ny fanaovana hosoka. Ianao ve ... Tohizo ny famakiana
Ahoana ny fomba hanaovana seza birao
Tsara ny fanaovana azy, tsy ela izahay no tsy nandefa. Tsy misy feo fa hitanao daholo ny ... Tohizo ny famakiana
Ahoana ny fomba fanaovana ny baolina kitra amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2018, 2014 ary 2010
Noho ny fangatahan'ny namako Edgardo Confessore amin'ny facebook (a triatra amin'ireo boomerangs) Mamela horonan-tsary vitsivitsy sy fampahalalana kely momba anao aho ahoana no anaovana ny baolina kitra baolina kitra eran-tany.
Ny baolina fiadiana ny amboara eran-tany atsimo atsimo amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2010, no anarany Adidas jabulani. Namboarin'i Adidas ary novolavolaina ary novolavolaina tao amin'ny University of Loughborough, any amin'ny Fanjakana Mitambatra. Ny teny Jabulani midika hoe amin'ny zoloa: mankalaza
Ny baolina dia misy takelaka telo-habe miisa 8 mifamatotra amin'ny thermally, namboarina avy tamin'ny etiléna-vinyl acetate (EVA) sy polyurethanes thermoplastic (TPU) hahavita baolina boribory lenta.
Ahoana no anaovana ny taratasy sandbara
Liana te hahafantatra ny fomba anaovana fitaovana sy zavatra ve ianao? Topazo maso Ahoana no hanaovana azy
Androany no anaovantsika ny fomba fanamboarana ny taratasy fasika.
Misy roul taratasy lehibe tsy voahidy, ary ampita amin'ny mpanonta printy izay manonta ny lafin'ny voam-pasika, ohatra, P80, ohatra
Amin'ny horonan-taratasy hafa dia apetaka amin'ny lakaoly izay tsy vita pirinty. Mba hisarihana ireo voa (kristaly) mankany amin'ny taratasy vita amin'ny glu, dia ampiakarina amin'ny herinaratra izy io ary mahasarika azy ireo ka maro no miraikitra amin'ny lakaoly.
Tiako ny tsipìka. Izaho koa dia manana ny iray amin'ny decathlon, izay mahafinaritra ahy indrindra. Fa… Tohizo ny famakiana
Ayer Otrebor nanontany anay tao amin'ny forum ny fanontaniana momba ny fomba fanaovana baoritra ballball namboarina. Tsy voavaha ny fanontanianao fa manantena izahay fa hanome anao hevitra ity lahatsoratra ity ary azonao zaraina aminay
Izahay dia nitady vaovao, na tamin'ny Espaniôla na tamin'ny Anglisy, ary ny marina dia tsy nahita vahaolana namboarina izahay. Ireo baolina ireo dia sarotra kokoa noho ny toa priori.
ny baolina Namboarina tamin'ny vokatra biodegradable sy sakafo izy ireo, afaka nihinana azy ireo isika ary tsy nisy nanjo antsika.
Ny kapsula dia vita amin'ny gelatin miaraka amina fitambaran'ny vokatra sakafo hafa, miafina. Ny atiny misy fandokoana sakafo sy glycol polyethylene, natao hanamboarana syrups.
Ny fanjaitra hypodermic dia iray amin'ireo famoronana izay nanova ny fahasalamana ary nanatsara ny kalitaon'ny fiainantsika. Ny… Tohizo ny famakiana
Ity horonan-tsary manaraka ity momba ny rafitra famokarana fantsona fluorescent no tena tiako indrindra mandra-pahatongan'ny ... Tohizo ny famakiana
Fomba fanaovana voanjo sy bolt
Betsaka aminareo no haka sary an-tsaina ny fomba fanaovana ny visy sy ny voanjo, saingy mendrika ny fahitana azy mivantana. Ny… Tohizo ny famakiana
Ahoana ny fomba anaovana ireo rojo. Miaraka amin'ny kanika dia iray amin'ireo fanontaniana napetrako matetika tamin'ny tenako. Aza … Tohizo ny famakiana